Tsanangudzo:Direct Current Generator,Inogona Kubudisa Magetsi,Solar Radio Set
Direct Current Generator,Inogona Kubudisa Magetsi,Solar Radio Set
Farira chiedza chekuvhenekera murima, gamuchira simba idzva, teknolojia itsva. Dzimba shomanana simba rekugadzira simba, chiedza chekunze, simba reimba, kukwanisa kushandiswa kwemagetsi kunogona kugutsikana. Simba duku rezuva rinovhenekera magetsi, apo pane magetsi kushandisa masimba emaspala, apo simba riripo kushandiswa simba rekuchengetedza, kuitira kuti iwe unakidzwe nehupenyu hwakanaka chero nguva. Inogona kupa magetsi , d yakajeka ikozvino jenereta , kuzosangana nezvinhu zvakasiyana-siyana. Outdoor emergency emergencying, small size, easy to bear, MP3 player, redio uye mamwe mabasa.
Pakati pezuva, simba rezuva rinopomerwa, iro rinoponesa simba idzva uye inobatsira kune dzimwe nyika uye ine utano. Green 0 mari, taura zvakanaka kubhadharo yakakosha emari. Kukwirira kwepamusoro kwezuva, panopera makore makumi maviri nemashanu, inogona kuparadzirwa neredhiyo pamusoro pemakero makumi maviri. Solar radio yakagadzirirwa .
Inofambidzana inofanirwa kugadzirwa. Kuti zviite kuti zvive nyore kuti vatengi vatakure uye vafambe pane zvavanoda, tinogadzira zvigadzirwa zvedu sezvigadzirwa. Iko nechemberi kwegadziriro yakagadzirwa nemwenje wekusimudza uye mwenje wepamusoro, kuitira kuti vatengi vagone kutarisana nemhepo. 5W Kubudirira kwepamusoro kwezuva, panotengeswa nesimba rezuva masikati, kugadzirisa dambudziko remagetsi kushandiswa usiku. Simba rezvitubu zvinosangana nezvido zvishoma zvemasimba, masimba ezuva anokonzera chiedza nekumwe nyaya dzine simba kana uchida, mishonga yekusimudza pamba